कोरोनाविरुद्ध सचेतना दौड | Hamro Khelkud
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – लव एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको आयोजनामा कोरोनाविरुद्ध सचेतना दौड शनिबार सम्पन्न भएको छ । बैकुण्ठ मानन्धर खेलकुद नेपाल र प्रयास मञ्चको सह–आयोजनामा भएको दौडको नाम बैकुण्ठ मानन्धर ५ किलोमिटर भेट्रान रोड रेस दिइएको थियो ।
सहभागी सबैले निर्धारित २५ किलोमिटर दूरी तय गर्न सफल भए । सहभागी मध्ये सबै भन्दा पाका ८४ वर्षीय डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ रहे । श्रेष्ठ डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ स्पोर्ट्स फाउन्डेसनका अध्यक्ष पनि हुन् । अन्य सहभागीमा दक्षिण एसियाली खेलकुदका कीर्तिमानी पूर्व धावक बैकुण्ठ मानन्धर, एभरेष्ट म्याराथनकी तीन पटककी विजेता याङदी लामा शेर्पा, एसियन मास्टर्स एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपका कांस्य विजेता धर्म महर्जन संयोजक बुद्धवीर लामालगायत रहेका छन् ।
कोरोना सचेतना दौड त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यालयको मुल गेट बाहिरबाट सुरु भइ पुनः त्यही आएर टुंगिएको थियो । दौडलाई तीन समूहमा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । ६० वर्षमाथि उमेरसमूहमा शम्भु दाहाल पहिलो, पुष्पलाल श्रेष्ठ दोश्रो र मंगलदास तण्डुकार तेश्रो भए ।
महिला खुला समूहमा याङदी लामा शेर्पा पहिलो, सीता रिमाल दोश्रो र राधा श्रेष्ठ तेश्रो बने । ४० देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहमा धर्म महर्जन प्रथम, भीमबहादुर गुरुङ द्वितीय र दीपककुमार रन्जित तृतीय स्थानमा रहे । विजेतालाई डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्रमाण पत्र र पदक वितरण गरे ।